३३ केजी सुन पक्रिएको ५ महिनामा के-के भयो विमानस्थल भन्सारमा सुधार ?
२०७४ असार १ बिहिबार, काठमाडौं । जेठ २१ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा बाहिरबाट अबैधरुपमा ल्याईएको सुन सहित तस्करका नाईके पक्राउ परेको ५ महिना पुगेको छ । गत पुष २१ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआईबीको टोलीले एयर अरेवियाको जहाजबाट युएइ हुदैँ काठमाडौं आएका गोपाल बहादुर शाहीको साथबाट सो सुन बरामद गरेपछि सबैले त्यतिबेला विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीहरु र विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई नै यससँग जोडेर विभिन्न आरोपहरु लगाउने गरेका थिए । ... बाँकी अंश»
चितवनमा हावाहुरीले करोडौँको केराखेती नष्ट
२०७४ असार १ बिहिबार, रत्ननगर । बिहिबार बिहान आएको हावाहुरीका कारण चितवनमा करोडौँको केराखेती नष्ट गरेको छ । ... बाँकी अंश»
डोल्पाको जुफाल विमानस्थल कालोपत्रे गर्न बन्द, दुई महिना लाग्ने तर यसै भन्न नसकिने !
२०७४ असार १ बिहिबार, दुनै । दुर्गम जिल्ला डोल्पामा यातायातको एकमात्र माध्यमका रुपमा रहेको जुफाल विमानस्थल बिहीबारदेखि बन्द भएको छ । ... बाँकी अंश»
दार्जिलिङको आम हडतालले सीमावर्ती बजार ठप्प
२०७४ असार १ बिहिबार, इलाम । भारतको दार्जिलिङमा आम हड्ताल भएपछि इलामको पूर्वी सीमावर्ती बजार ठप्प भएका छन् । ... बाँकी अंश»
आफ्नै आयस्रोत सुकाउन किन सक्रिय बन्दै छ नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ?
२०७४ जेठ ३१ बुधबार, काठमाडौं । सञ्चालक समिति तथा संस्थानका कर्मचारीहरु नै संस्थागत सुधारतर्फ भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तितर्फ बढी सक्रिय बन्दा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले भने वार्षिक नौ करोड भन्दा बढी घाटा बेहोर्दैआएको छ । एशियाली विकास बैैंकको सहयोगमा बनेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा तल रहेको एयर कार्गाे भवनको व्यवस्थापन गराउने विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका कारण प्राधिकरणले अहिले वार्षिक सो बराबरको नोक्सानी बेहोरिरहेको हो । ... बाँकी अंश»
अवकाश पछि मासिक २ लाख कमाउने सुत्र सार्वजनिक !
२०७४ जेठ ३१ बुधबार, एजेन्सी । यदि तपाई ५० बर्षको उमेरमा अवकाश भएर आनन्दको जिवन चाहानुहुन्छ भने तपाई एक उपाय अपनाउन सक्नुहुनेछ जो सजिलो पनि छ । यसका लागि तपाईले आजैबाट अवकाशको योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । सो माध्यमबाट तपाई सजिलै ५० बर्षको उमेरमा रिटायर हुन सक्नुहुनेछ साथै महिनाको २ लाख रुपैया आय सहित आनन्दको जीवन बिताउन सक्नुहुनेछ । ... बाँकी अंश»
अर्थमन्त्री कोरीया प्रस्थान
२०७४ जेठ ३१ बुधबार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कोरीया प्रस्थान गरेका छन् । एशियाली पूर्वाधार बैंकको दोस्रो वार्षिक बैठकमा सहभागी हुनको लागि मन्त्री कार्की बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, काठमाडौं । रेमिटेन्स कम्पनी आईएमईले आफ्नो स्थापनाको १७औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनिले “१७औँ वार्षिकोत्सव नयाँ प्रविधिको” भन्ने मूल नाराका साथ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि मंगलबार वार्षिकोत्सव मनाएको हो । ... बाँकी अंश»
तुलसीपुरका व्यवसायीको अवस्था अझै अज्ञात, सूचनादिनेलाई प्रहरीको १ लाख अफर
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, तुलसीपुर । गत शुक्रबार अपहरणमा परेका तुल्सीपुरका व्यवसायी राजकुमार श्रेष्ठको अवस्था अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । गत झण्डै एक साता पुग्नै लाग्दा पनि व्यवसायीको अवस्थाबारे जानकारी नभईरहँदा प्रहरीले भने उनको बारेमा सत्यतथ्य चाँडै पत्ता लाग्ने बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, भीमदत्तनगर, । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला आगामी असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्ने सहमति भएको छ । ... बाँकी अंश»
दश महिनामा एक हजार आठ सय उद्योग दर्ता
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौँमा एक हजार ८१९ उद्योग दर्ता भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ जेठ ३० मंगलबार, काठमाडौँ । अन्तर्र्रािष्ट्रय श्रम सङ्गठन आइएलओ सञ्चालक समिति ‘गभर्निङ बडी’को सहायक सदस्यमा नेपाल निर्वाचित भएको छ । ... बाँकी अंश»
बर्जर पेन्टस् कम्पनीका प्रमुखलाई विप्लवका कार्यकर्ताको कारबाही
२०७४ जेठ २९ सोमबार, हेटौँडा । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बर्जर पेन्ट्को कम्पनी प्रमुखमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका छन् । सोमबार विप्लवका कार्यकर्ताहरुले उनले प्रयोग गर्ने बा. ८ च. ८६१७ नम्बरको कारमा तोडफोड पनि गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
सङ्ख्यागत दृष्टिले धेरै कर तिर्नेहरुमा ट्रेडिङ कम्पनीकै वर्चस्व
२०७४ जेठ २९ सोमबार, काठमाडौं । कर राजश्वमा महत्वपूर्ण हिस्सा बोकेको ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् कर तिर्ने ठूला करदाताहरुमध्ये यो वर्ष पनि ट्रेडिङ क्षेत्रकै हालीमुहाली रहेको देखिएको छ । ठूला करदाता सेवा कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार यो आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी हुँदासम्म कूल एक हजार एकको संख्यामा ठूला करदाता रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही समयमा यो संख्या ८सय ८८ वटा थियो । ... बाँकी अंश»
तुलसीपुरमा अत्याधुनिक बसपार्क निर्माणकार्य सुरु
२०७४ जेठ २९ सोमबार, तुलसीपुर। दाङको तुलसीपुरमा सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माणको काम सुरु भएको छ । आज एक कार्यक्रमका विच तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यकारी अधिकृत टोपेन्द्र केसीले बसपार्क तथा सपिङ्ग स्टल निर्माणको शिलन्यास गरेका छन्। ... बाँकी अंश»
विराटनगरका भन्सार एजेण्टबीचको विवाद उत्कर्षमा, अदालत जाने तयारी
२०७४ जेठ २९ सोमबार, काठमाडौं । विराटनगर भन्सारका एजेन्टहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष विजेन्द्र परासरको मनोमानी गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षीहरु न्यायिक उपचारमा समेत जाने तयारी गरेपछि उनीहरुबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । कार्यसमितिको समय सकिएको लामो समयसम्म पनि संस्थापन पक्षले नयाँ निर्वाचन नगरेको र विपक्षीहरुलाई थाहै नदिई अध्यक्षले मनोमानी रुपमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएका छन् । तर, अध्यक्ष परासरले भने आफूहरुबीच कुनैपनि विवाद नरहेको भन्दै सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको दाबी गरे । ... बाँकी अंश»
जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर, कोषले १२ अर्ब ऋण दिने
२०७४ जेठ २९ सोमबार, काठमाडौँ। नागरिक लगानी कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ । कोषको कार्यालयमा आयोजित सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले हस्ताक्षर गरे। सम्झौतानुसार कोषले एउटा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग मात्रै त्यस्तो ऋण लिने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने गरेको थियो । ... बाँकी अंश»
जनप्रतिनिधिलाई उपभोक्ताको प्रश्न : 'ढुङ्गे युग'मा रहेको असनको मुहार नफेर्ने ?
२०७४ जेठ २९ सोमबार, काठमाडौं । उपत्यकाकै मुटु क्षेत्र मानिने बसन्तपुर नजिकै रहेको व्यस्त ठाउँको नाम हो असन । असन भन्ने वित्तिकै जो कोहीले कुरा झिकिहाल्छन् ‘व्यस्त र भीडभाड’हुने ठाउँ हो । असनको बसाई भने साह्रै साँघुरो । अस्तव्यस्त घर असरल्ल सरसामान । साँघुरा गल्लीमा मानिसको घुँइचो उस्तै । ... बाँकी अंश»
विद्यासुन्दर शाक्य र शेष घलेबीच सहरी व्यवस्थापनबारे छलफल
२०७४ जेठ २९ सोमबार, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष शेष घलेबीच सहरी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ । ... बाँकी अंश»
तरकारी खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग
२०७४ जेठ २९ सोमबार, बागलुङ। पछिल्लो समयमा तरकारी खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग निकै बढदो रहेको छ। व्यसायिक खेती गर्नका लागि निकै सहज हुने भएर यसमा कृषकहरु आकर्षित देखिन्छन। ... बाँकी अंश»